MacBookPro ao anaty Freezer | Martech Zone
Wednesday, May 2, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Henonao tsara izany! Nanana olana tamin'ny MacBookPro aho tato ho ato izay tsy ahafahako mamerina azy io indray. Mipetraka eo fotsiny izy ary tsy manao na inona na inona. Tena mahasosotra izany. Nanomboka niahiahy aho fa mety ho olana amin'ny thermostat io ka nanao fitsapana aho - napetrako tao anaty vata fampangatsiahana izany. 10 minitra taty aoriana dia navoakako ary nipoaka tampoka… tsy misy olana.
Notsapaiko tamin'ity fomba ity imbetsaka aho ary nanamafy fa izany no olana. Nisy olon-kafa nanana an'io olana io ve? Nanafatra iray vaovao ny sangan'asa ary nanandrana namindra ny fisie-ko omaly alina (izany no tsy nahitanao lahatsoratra iray) fa tsy azoko atao ny miasa. Miresaka mahasosotra!
Ka anio dia handray tanana amin'ny mpampiasa super-duper-mac-mpampiasa aho, Bill, raha hizaha raha afaka mamindra ireo rakitra isika ary mitondra an'io MacBookPro marary io any amin'ny dokotera.
May 2, 2007 amin'ny 9: 14 AM
Miala tsiny fa henoko i Doug, vao haingana aho nametraka programa fanaraha-maso mpankafy tao amin'ny Macbook satria tsy tiako ny hafanana nahazo azy, napetrako izany ka tsy avelany hilatsaka ambanin'ny 3500rpm ny mpankafy. Tsy niasa tamin'ny 1800rpm izy io fa avelao ny CPU hiakatra amin'ny 65C alohan'ny hanombohany ny mpankafy, toa avo loatra izany, saingy mamela ny fihoarana ilay rindrambaiko. Heveriko fa nantsoina hoe smcFanControl. Saingy tsy heveriko fa hamaha ny olanao io 🙂
Azonao atao ihany koa ny miaina ao anaty vata fampangatsiahana miaraka amin'ny solosaina finday? fidirana haingana amin'ny labiera?
May 2, 2007 amin'ny 10: 38 AM
Nomeko izany koa (nitifitra ny mpankafy SMC aho) fa tsy nanampy. Ny MacBookPro tsy tena nafana loatra… fa mieritreritra fotsiny izany rehefa manomboka. Raha mbola tsy miverina mamerina indray aho dia tsara. 🙂
May 2, 2007 ao amin'ny 12: 04 PM
Doug, noheveriko fa ny hevitra iray manontolo momba ny andalan-tsoratra Mac an'ny milina mifototra amin'ny Windows dia tsy mila mamerina amin'ny fotoana rehetra ve ianao?
Voamarikao ve fa tsy nilaza Mac momba ny PC aho? Nahoana? Samy solosaina manokana Both
May 2, 2007 ao amin'ny 12: 18 PM
… Heveriko fa fantatrao fa afaka manomboka ny Mac amin'ny alàlan'ny firewire ianao amin'ny alàlan'ny fihazonana ny bokotra T mandritra ny boot. Famindrana rakitra mora foana…
May 2, 2007 ao amin'ny 12: 48 PM
Nandany ny alina nanandrana an'io foo io aho! Hijanona amin'ny adiny 1 sy 15 minitra izany ary tsy hitohy intsony. Nifoha maraina aho ary mbola tamin'ny adiny 1 sy 15 minitra! Arrrgh!
Hanandrana aho Klone fandefasana karbaona Manaraka!
May 3, 2007 amin'ny 2: 35 AM
Toa izany fa misy ny olana amin'ny kapila ao amin'ny bokinao Mac.
Efa nanandrana nihazakazaka ve ianao DiskWarrior? Fandaharana tsara hananana raha manana Mac ianao (Matetika aho no nanontany tena hoe maninona izy ireo no mbola tsy novidian'ny Apple…)
Andraso fa efa nihazakazaka ve ianao Applejack na izany aza - izay afaka mamonjy ny andro, ary freeware.
Mirary soa - enga anie ny herinao homba anao.
May 2, 2007 ao amin'ny 11: 08 PM
Sarotra be ny mampiasa Macs ka tsy afaka mifindra rakitra iray ianao? Wow. Mampinono!
May 3, 2007 amin'ny 7: 23 AM
Heveriko fa tsy sarotra ampiasain'izy ireo mihitsy - saingy azo antoka fa tsy mandeha tsara izy ireo rehefa marary toa ny ahy! Handeha any amin'ny magazay Apple aho anio hijery izay hitan'izy ireo.